Burma Partnership » Weekly Political Events Regarding the SPDC’s Election (025-2010)
By Network for Democracy and Development • July 19, 2010
National League for Democracy (NLD) condemned the Election Commission’s decision allowing National Democratic Front (NDF) registered despite NLD’s objection on the use the bamboo hat as NDF party symbol
U Aung Thaung, the Minister of the Ministry of Heavy Industry 1, informed Kachin leaders on 12 July that Kachin State Progressive Party (KSPP) led by Dr. Tuja will not be allowed to register because of Dr. Tuja’s connection to armed Kachin Independence Organization.
Philip J. Crowley, the Spokesperson of the US Department of State, stated, at the press conference held on 12 July, that the Burmese military regime’s flawed elections were far from free, fair and legitimate result.
ခမောက်ပုံ ပါတီတံဆိပ် အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကန့်ကွက်သည့်ကြားမှ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အမျိူးသားဒီမိုကရေစီအင်အာစု NDF ပါတီကို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကောက်မရှင်က နိုင်ငံရေးမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုလိုက် သည့်အပေါ် အမျိူးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ် NLD က လက်မခံကြောင်း ရှုတ်ချလိုက်သည်။
ဒေါက်တာတူးဂျာသည် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့နှင့် ဆက်စပ်လျှက်ရှိသဖြင့် ဒေါက်တာတူးဂျာဦးဆောင်သော ကချင်ပြည်နယ်တိုးတက်ရေးပါတီ KSPP ကိုပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်းအမှတ် ၁ စက်မှုဝန်ကြီး ဦးအောင်သောင်းက ကချင်ခေါင်းဆောင်များကို ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့က ပြောကြားလိုက်သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ၂၀၀၃ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်မြောက်ရေးနှင့်ဒီမိုကရေစီအက်ဥပဒေကို သက်တမ်းတိုးရန်အတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အောက်လွှတ်တော်မှ ကန့်ကွက်သူမရှိ အတည်ပြုလိုက်ကြသည်။
Tags: 2010 Elections, Burmese, Ethnic Nationalities, Network for Democracy and Development, Political Parties, Political Prisoners, Weekly Political Events